Ny tetika farany tsara indrindra amin'ny famantaranandro amin'ny Android Wear | Androidsis
Eder Ferreño | | SmartWatch, Android cheat, Tutorials
Ny andiany voalohany amin'ny famantaranandro marani-tsaina miaraka amin'ny Wear OS (ny fanavaozana ny Android Wear) dia efa zava-misy. Fiovana lehibe iray izay antenain'i Google hanome hery vaovao ho an'ny smartwatches eny an-tsena. Ny fividianana famantaranandro miaraka amin'ity rafitra miasa ity dia mbola voafetra ihany, na dia antenaina hitarina be amin'ny taona 2018. Nefa ny ankamaroan'ny androany dia mampiasa Android Wear.
Noho izany, Avelanay eto ambany miaraka amina andiam-pitaka ho an'ny Android Wear ianao. Satria ny ankamaroan'ny famantaranandro dia mampiasa an'ity kinova amin'ny rafitra fiasa ity. Amin'ity fomba ity dia afaka mivoaka bebe kokoa amin'ny famantarananao ianao. Vonona hianatra ireo tetika ireo?
Fetsy tsotra ireto, saingy mamela anao hampiasa famantaranandro tsara kokoa amin'ny Android Wear. Ny sasany mety ilaina amin'ny mpampiasa izay mividy smartwatch voalohany. Ka manantena izahay fa hanampy.
1 Ampandehano ny Google Assistant
2 Tadiavo ny telefaoninao
3 Ovao ny haben'ny lahatsoratra
4 Amboary ny bokotra famantaranandro
5 Ampandehano ny fifandraisana WiFi
6 Amboary ny fitendry
Ampandehano ny Google Assistant
Ny iray amin'ireo antony lehibe hividianan'ny mpampiasa finday maranitra dia ny fampiasana ny Google Assistant. Ny mpamosavy dia apetraka ho toy ny fenitra amin'ny Android Wear. Na izany aza, tsy maintsy ampandehananay izany mba hampiasa azy io. Fa dingana iray tena tsotra ity, mankanesa fotsiny amin'ny famantaranandro ary lazao hoe "OK, Google." Amin'izany fomba izany no hampavitrika ny mpamosavy ary hanomboka hiasa.
Tadiavo ny telefaoninao
Mety hitranga fa tsy hitanao ny findainao ao an-trano amin'ny fotoana iray. Fampiasana izay tsy dia fantatry ny maro, fa tena ilaina izy io, mamela antsika hahita ny telefaona amin'ny alàlan'ny smartwatch. Tsy maintsy mandeha any amin'ny lisitry ny rindranasa ary ao no ahitantsika safidy antsoina hoe «Tadiavo ny findaiko». Tsindrio fotsiny eo dia ho hitantsika ny findaintsika. Hisy kaomandy halefa amin'ny telefaona ary hanao feo izany, hahafahantsika mahita azy.
Ovao ny haben'ny lahatsoratra
Ny efijery famantaranandro dia kely dia kely, zavatra mety hahatonga azy ireo dia misy mpampiasa izay sarotra aminy ny mamaky ilay lahatsoratra miseho eo amin'ny efijery. Soa ihany fa mamela antsika hanova ny haben'ny lahatsoratra ny Android Wear mba ho mora amintsika ny mamaky. Tsy maintsy mandeha any amin'ny toeran'ny fitaovana isika ary ao no hahitantsika safidy ahafahantsika manova ny haben'ny lahatsoratra. Ny sisa ataontsika dia ny misafidy izay lehibe indrindra hita eo amin'ilay lisitra.
Amboary ny bokotra famantaranandro
Lafiny iray izay tian'ny mpampiasa betsaka ny mahay manamboatra endrika sasany amin'ny fiambenan'izy ireo. Ny ampahany tsara dia azo atao izany amin'ny Android Wear 2.0. Amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny manamboatra ny bokotra famantaranandro. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mankany amin'ny toe-javatra, ao anatin'ny toe-javatra no andehananay mankany amin'ny fanaingoana. Ho hitanao ao ny safidy antsoina Amboary ny bokotra fampiasa amin'ny fitaovana ary ho afaka misafidy izay tadiavintsika tsirairay amin'ireo bokotra hatao. Ka mampiasa ny famantaranandro amin'ny fomba ahazoana aina kokoa ho antsika.
Ampandehano ny fifandraisana WiFi
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony hataontsika rehefa mividy smartwatch dia ny mampihetsika ny fifandraisana WiFi. Noho izany, tsy maintsy jerentsika fa mandeha tsara izany. Amin'ity tranga ity dia mila mandeha amin'ny famantaranandro isika. Ao no ahitantsika a Safidy fifandraisana ary ny iray amin'izy ireo dia WiFi. Amin'ity tranga ity dia halefa ny WiFi. Ka efa afaka mampiasa ny fifandraisana Internet amin'ny hetsika isan-karazany amin'ny famantaranandro isika.
Amboary ny fitendry
Lafiny iray lehibe manandanja amin'ny fiambenanay miaraka amin'ny Android Wear ihany koa ny fikirakirana fitendry. Koa satria maro aminareo no afaka maka sary an-tsaina, dia tsy dia mampahazo aina loatra ny manoratra amin'ny efijery famantaranandro. Soa ihany, ny fiambenana miaraka amin'ny Android Wear dia manome andiana safidy maromaro hanamorana ny fanoratanay. Tsy maintsy mandeha amin'ny famantaranandro ary ao anatiny dia mankany amin'ny fizarana fanaingoana isika. Manaraka izany dia miditra amin'ny fomba fampidirana isika.
Ao anatiny no tsy maintsy ataontsika safidio ny kitendry Google. Ho eto no ahazoantsika safidy maromaro izay ahafahantsika manamboatra ny klavier mba ho mora kokoa ny manoratra. Safidintsika ny safidy mety indrindra amintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ny tetika farany tsara indrindra amin'ny famantaranandronao miaraka amin'ny Android Wear
Ny toetran'ny Meizu 15, 15 Plus ary M15 dia voasivana
Ny lalao karatra tsara indrindra ho an'ny Android